Waalidiinta dhibanayaashii lagu dilay duqayn ka dhacday dalka Yemen oo Sucuudiga ka dalbanaya magdhow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWaalidiinta dhibanayaashii lagu dilay duqayn ka dhacday dalka Yemen oo Sucuudiga ka dalbanaya magdhow
March 26, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Waalidiinta dhibanayaashii lagu dilay duqayn ka dhacday dalka Yemen oo Sucuudiga ka dalbanaya magdhow. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa doonaya magdhow kadib markii da’ yar ay dhaleen oo ka badan 40 lagu dilay duqayn diyaaradeed oo ka dhacday gudaha dalka Yemen.
Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay maanta oo Axad ah gudaha magaalada Garoowe, Cabdullaahi Cali, oo wiilkiisa lagu dilay weerarka ayaa waxa uu yiri: “Waxaanu ka dalbanaynaa Sucuudiga in ay maal magdhow ah siiyaan qaraabadii dadka lagu dilay duqaynta.”
Waalidiinta dhibku ku dhacay ayaa dowladda Soomaaliya uga mahadceshay sida ay uga falcelisay dhacdada.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya ee shaqada ka tagaya Cabdisalaam Cumar Hadliye ayaa dhacdada ku tilmaamay “mid argagax leh oo aad u xun oo loo geystay dad biri-magaydho ah oo Soomaaliyeed, Hadliye ayaa si rasmi ah weerarka ugu eedeeyay xulufada uu hoggaamiyo Sucuudigu.
18-kii bishaan Maarso, ugu yaraan 42 qof oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo u badan dhalinyaro ayaa lagu dilay duqayn ay diyaarad la beegsatay dooni xeebta dalka Yemen iyaga oo isku-dayay in ay gaaraan dalka Suudaan.
February 9, 2017 Madaxweynaha dowladda Puntland oo ka tacsiyeeyay geerida Cade
March 11, 2017 Odayaasha dhaqanka gobolka Nugaal oo ciidamada gadoodsan ee Puntland u jeediyay in ay ka baxaan kantaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe
January 9, 2017 Ciidamada ammaanka Puntland oo magaalada Gaalkacyo ka bilaabay howlgal ammaanka lagu adkaynayo
December 3, 2016 Ciidamada Puntland oo u dhaqaaqay sidii ay dib u gala wareegi lahaayeen maleeshiyada ISIS magaalada Qandala
Parents of victims killed in airstrike attack in Yemen demand compensation from Saudi Arabia
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay haayadaha QM ee ka shaqeeya gudaha Puntland
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Talaado ah kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe haayadaha Qaramada Midoobay ee fadhigoodu yahay magaalada Garoowe, kuwaasoo dowlada kala shaqeeya arrimaha insaanimada [...]
Saddex dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay Shabeellaha Hoose
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saddex dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya. Duqeynta ayaa Axadii ka dhacday deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay bayaan ku sheegeen taliska Mareykanka [...]